Dowlada KMG ah oo sheegtay in ay Wadahadal kula jirto Saraakiil sare oo katirsan Al Xisbul islaami. | Halganka Online
Dowlada KMG ah oo sheegtay in ay Wadahadal kula jirto Saraakiil sare oo katirsan Al Xisbul islaami.
Dowladad KMG ee u shaqaysa cadawga islaamka ayaa ka hadashay dhaliil shalay uga timid Ururka Xisbul islaam garabka Axmed Madoobe oo ku aadaneyd in DKMG ah ay ka gaabisay dib u Heshiisiin ay lagasho xoogaga kasoo horjeeda.
C/risaaq Qeylow Afhayeenka Wasaarada Warfaafinta DKMG ah ayaa sheegay in dowladiisu diyaar u tahay wadahadal ay lagasho Ururka Xisbul Islaam balse wuxuu sheegay in Ururkaasi qarka u saaranyahay burbur kadib markii uu ka baxay Sheekh Xasan Turki oo kamid ah Hogaanka Shabaabul Mujaahidiin.
Sarkalakan u hadlay Dowlada KMG ah ee gaalada la shaqaysa wuxuu wax lagu qoslo ku tilmaamay dhaliishii shalay uga timid Maxamed Macalin Madaxa Warfaafinta Xisbul Islaam ee ahayd in Dowlada KMG ah aysan katalin taako kamid ah magaalada Muqdisho.
“warka ka soo yeeray Maxamed Macalin waa mid waxba kama jiraan ah,dowladu awood bay leedahay laakin Xisbul islaam maba leh awood in ay burburaan ayay qarka u saaranyihiin Sheekh Xasan Turki iyo Muuse Caraale way ka bexeen”ayuu yiri Qeylow oo muuqday Nin ka faa’iidaysanaya hadaladii xanafta lahaa ee shalay ka soo yeeray Maxamed Macalin.
Qeylow oo hadalkiisa sii wata ayaa carrabka ku dhiftay in Dowlada KMG ah ay wadahadal meel fiican gaaray ay laleedahay Saraakiil muhiim ah oo katirsan Ururka Xisbul Islaam dhawaana ay saxaafadda usoo bandhigi doonaan arrinkaas sida uu hadalka u dhigay.
Hadalkan kasoo yeeray Dowlada KMG ah ee gaalada la shaqaysa ayaa ku soo aadaya xili Madaxa Warfaafinta Xisbul Islaam uu shalay sheegay in ay diyaar u yihiin wadahadal ay galaan AMISOM islamarkaana dhaliil dhanka dib u Heshiisiinta ah usoo jeediyay dowlada KMG .
« Mujaahidiinta Gobalka Hiiraan oo Xukuno Tacziir ah ku fuliyey dhalinyaro daawanayay Filimo xun xun. Maydadka dadkii xalay ku dhintay qarax ka dhacay Wadada 30-ka oo lasoo bandhigay iyo Saraakiil Xisbul Islaam ah oo kamid noqday maydadkaas (SAWIRO + COD). »